Wayland marka la fiiriyo Fedora dib ayey u dhacaysaa, halka Centos 7 ay leedahay RC | Laga soo bilaabo Linux
Ago dhawr bilood suurtagalnimada in Fedora ay haysato Wayland marka loo eego qaabka 21 ayaa lagu dhawaaqay.Laakiin sida ku cad koontada tannhauser, suurta gal noqon mayso.
Wuxuu noqday Christian Schaller, horumariyaha shirkadda GStreamer ku xayeysiiso bartaada in Fedora 21 qaar ka mid ah qaybaha Wayland ay sii maqnaan doonaan, markaa haddii waxa aad rabto ay yihiin Fedora leh Wayland dhammaystiran (oo xitaa aan ahayn tan caadiga ah), waa inaad sugto ugu yaraan illaa nooca 23 (taas oo aragti ahaan waxay noqon laheyd dhamaadka sanadka 2015)
Waxa kale oo uu sheegayaa waxa laga heli karo Wayland ee Fedora 21: Fadhiga Wayland ee GDM, XWayland shaqeynaya laakiin aan lahayn 3D dardargelinta, kalfadhiga Wayland wuxuu ku shaqeynayaa darawallo bilaash ah (hadda wuxuu kaliya ka shaqeeyaa Intel, laakiin wuxuu rajeynayaa in ka hor sidoo kale ka shaqee ATI iyo NVIDIA), soo gelinta IBUS (oo ay weheliso macmiilka IBUS X) iyo xawaaraha Touchpad. Taageerada loo hayo ATI iyo NVIDIA oo ay la socdaan wadayaal gaar ah iyo taageerada taabashada ayaa wali maqan. Sidoo kale baxo liistada waxqabad.
Warar kale oo la xiriira Red Hat, CentOS 7 horey ayey u sii daysay Bixinta Musharax. Sida wararka laga keenay Red Hat, waxay u adeegsan doontaa kernel 3.10, XFS oo ah nidaamka feylka caadiga ah, weelka Docker, Gnome 3.8, Kde 4.11, iwm.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Wayland asal ahaan Fedora dib ayey u dhacaysaa, halka Centos 7 ay leedahay RC
Waa inaan sugnaa, waxaan dooneynay inaan ka takhalusno jirkii hore ee Xorg dhowr sano, taas oo jiido yar ku ah nidaamyada GNU.
cirka isku shareertay dijo
ayaa la filayay…. markale…. ¬¬
Ku jawaab skyark
Marka hore waxay ahayd Ubuntu oo leh MIR, haddana, Fedora oo la socota Wayland?
Koofiyad Cas, ma ahan j # $% s.
Waxaan cadeynayaa inaan ahay jaahil mowduucan sidaa darteed waxaan weydiinayaa:
Ilaa intaan ogahay, distro-ga aan isticmaalo (Bridge Linux, oo ku saleysan Arch) horeyba wuxuu u adeegsadaa wayland asal ahaan - waxaan ku ogaaday mid ka mid ah cusbooneysiinta badan. Muxuu ku kala duwan yahay X.org ama MIR tusaale ahaan?
Arch wali ma isticmaalo wayland, waxay leedahay baakad salka ku heysa laakiin jawiyada ilaa iyo hada laga saarayo kalfadhiga gnome 3 mana hubo inay wali isticmaalayaan Xorg
Waad salaaman tahay, waxaan ku tusayaa wax soo saarka «locate wayland» buugayga xusuus qor: http://paste.desdelinux.net/5006
Xaqiiqda ah in baakadaha ay ku jiraan macnaheedu ma aha in la isticmaalayo.
Waad ku mahadsan tahay sheegista Diazepan!
Runtu waxay tahay, inkasta oo horumarka la sameeyay, haddana waxaan sidoo kale lahaa aragti ah in u haajiriddan Wayland ay ahayd mid aad u horumarsan, heerkan xitaa Tito Mark iyo Mirkiisa horay ayuu u soo bixi doonaa
Haddii aan tijaabiyo CentOS 7 waana wax weyn: D. Toddobaadka soo socda waxaan arki doonaa sii-deynta ugu dambeysa :).
Waxaa la doorbidaa in la sugo, ah intii aad kalabadh u socon lahayd oo aad u qaylin lahayd, oo aad haddaba uhadli lahayd guud ahaan intii aad odhan lahayd cayayaanka iyo masaska sunta ah, haddii aynaan jeclaan waxaas oo kale, waxaan si fiican uga caawin karnaa hagaajinta mashaariicda, in haddii aan la aadin tagtay.
Ugu dambeyntiina waxaan dhammeyn doonnaa tobankan sano welina waxaan isticmaali doonnaa xorg.
Waad isticmaali kartaa qaybinta RebeccaBlackOS oo isticmaasha kaliya waddada
Anigu taas ma fahmin (runtiina Gnu / Linux waxba kama fahmin) laakiin maxaa dhici kara haddii uusan is beddelin, ma si xun baa u shaqeysay ????
Horumar ma ka samayn karaa horumarka Xorg ??? Hadda way jiraan kuwo ka duwan ama waxay rabaan inay sameeyaan adeegyo garaafyo kala duwan ah, hal shay oo u muuqday mid caadi ah hadda way beddeleen ...
Horaad u aragtay shirkii Linux dhuuqmada !! Waa inaad aragtaa hadaadan arag.
Haa haa Elav, wuuna saxsanaa waa ra'yigayga hooseeya. In kasta oo ay yiraahdaan kala duwanaanta ayaa dhadhan ...
Laakiin haddii barnaamijyayaashu ay diiradda saaraan 10 mashruuc oo aysan kun ka dhigin fargeetooyinkooda (ee fargeetooyinka horay loo muday).
Waxaan u maleynayaa in Gnu / Linux ay u isticmaali laheyd saaxiibtinimo Windows user-ka!
@ianpocks, faallooyinka waxaa loogu talagalay Pandev 😉
Horey waan u arkay, maxaa daawo ah, waxaan ku qasbanaan doonnaa waxa jira xD ..., qorshooyinka dhameystirka ee wayland waa kuwo lagu kalsoonaan karo sida balanqaadyada doorashada ee xisbiyada siyaasadeed ee xddddd ...
Waxaan su'aal qabaa, markaan si buuxda u hirgaliyo habka loo yaqaan 'wayland', waa maxay faa iidada uu helayaa isticmaalaha guud? Ma ogaan doonaa wax isbedel ah?
Heerkan waxaan ku dhamayn doonnaa inaan aragno Mir oo shaqeynaya kahor ... 😉
Laakiin sida ay u afeefteen Mirku uma dhihin Wayland horeyba wey u diyaarsaneyd oo xitaa qaarkood waxay dhaheen waa diyaar ilaa tobankii sano ee la soo dhaafay? juaz juaz, heerkan xitaa Ubuntu oo leh Mir ayaa goor hore soo baxa.
mar labaad, wayland waa diyaar, laakiin wax kasta oo kale diyaar ma ahan, DE, codsiyada iwm, haddii gnome, kde, iwm, aad u gaabis yihiin, wax yar baa laga qaban karaa.
Haa haa, waa sidaa diyaar markaa aadna aragto in xitaa taageero badan oo kormeerayaal ah xaaladaha aysan lahayn, kumanaan waxyaalood oo kale.
EDIS-C IDE khafiif ah oo loogu talagalay luqadda C